Linux 5.6 RC1 yakaburitswa neWireGuard rutsigiro, gore 2038 gadziriso, USB4 rutsigiro uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi, Linus Torvalds akazivisa yekutanga RC vhezheni yeLinux 5.6, mariri zvakawanda zvakanaka zvinotonhorera zvinosanganisirwa, ndozvazvakaita naWireGuard (iyo yatakataura nezvayo muzvinyorwa zvakapfuura), standard USB4, iyo itsva Zonefs faira system, zvigadziridzo zvekuchengetedza, uye zvimwe zvakawanda.
Kune vazhinji munharaunda, iri ibasa rakakosha kwazvo izvo zvaitwa uye Linux 5.6 ingangove iri rinonakidza kwazvo vhezheni kubvira Linux 5.0. Kune akawanda maficha matsva uye kugadzirisa mune iyi vhezheni yekernel uye vanogona kusvika nekukasira pane yayo yakagadzikana vhezheni munenge mwedzi miviri.
Shanduko huru muLinux 5.6 RC1
Sezvatakataura muzvinyorwa zvakapfuura David Muller, Linux network stack inogadzirisa yakatora zvigamba kubva kuna WireGuard kuti ishandiswe muLinux Kernel uye ikozvino iro basa ratove rinoenderana zviri pamutemo neLinux 5.6 RC1.
WireGuard ndeye software application uye nyowani yakavhurika sosi yekutaurirana protocol uye vakasununguka. Iyo VPN yakapusa, inokurumidza uye yazvino inoshandisa advanced encryption. Inokurumidza, yakapusa, yakareruka, uye inobatsira kupfuura IPsec. Vazhinji vanozviona seinogona kutsiva OpenVPN.
Kuwedzeredzwa kweinodiwa zinc encryption inopindirana kune iyo WireGuard chaiyo yakavanzika network yakatanga kubva Linux 5.5.
Kuenderera mberi, WireGuard inoshandisa Curve25519 kuchinjana kiyi, ChaCha20 yekunyorera, Poly1305 yekusimbisa data, SipHash yeiyo hash tafura kiyi uye BLAKE2s yeiyo hash. Iyo inotsigira Layer 3 ye IPv4 uye IPv6 uye inogona kuvhara v4-in-v6 uye zvinopesana. WireGuard yakatogamuchirwa nevamwe vanopa VPN sevhisi seMullvad VPN, AzireVPN, IVPN, uye cryptostorm.
Imwe shanduko izvo zvimire, ndiyo yakawedzera rutsigiro rweiyo USB4 standard. Iyi tekinoroji iyo yakavakirwa pane yazvino Kutinhira kududzirwa (vhezheni 3) uye inovimbisa yakafanana yepamusoro kumhanya (inosvika 40Gb / s).
USB4 inoshandisa yechinyakare USB-C chinongedzo uye iri kumashure inoenderana ne USB zviyero, inosanganisira USB 3.2 iyo inopeta kumhanyisa kumhanya kwekubatanidza USB (kubva pa10 Gb / s kusvika 20 Gb / s), USB 2.0 uye Thunderbolt 3 pachayo. inobatanidza 4K kana 8K kuratidza ku USB, kunze kweizvozvo iyo inobvumidza kubatanidza akateedzana akati wandei madivayiri e USB kuketani mune imwechete chiteshi.
Pamusoro pezvo, inotsigira emagetsi ekuratidza anonyanyisa simba e100 watts kuburikidza neUSB Power Kuendesa mashandiro.
Kumwe kukura kukuru izvo zvinosvika ne Linux 5.6RC1, ndizvo izvi Inova iyo yekutanga nucleus yakarongedzwa kwema32-bit masisitimu apfuura gore ra2038.
Kubva pa32-bit Unix neLinux, vane iyo nguva kukosha mu yakasainwa manhamba ese 32-bit iyo ine yakanyanya kukosha ye2147483647. Kunze kwenhamba iyi, kuwanda kwekufashukira kunogadzirwa, uko kukosha kuchachengetwa senhamba isina kunaka.
Izvi zvinoreva kuti ye 32-bit system, iyo kukosha kwenguva haikwanise kudarika 2147483647 masekondi mushure meNdira 1, 1970. Nemazwi akareruka, mushure me 03:14:07 UTC musi waNdira 19, 2038, nekuda kwekufashukira kwenhamba, nguva yacho ichaverengerwa sa “Zvita 13, 1901” pachinzvimbo chaNdira 19, 2038.
Nezve Linux 5.6 RC1 Hardware rutsigiro inosvika nerutsigiro rwe:
NVIDIA GeForce RTX 2000 Turing inotsigira iyo itsva yakavhurika sosi mutyairi iyo inogona kupa Hardware kumhanyisa, asi ichiri kuvakirwa pane binary firmware. Shanduko dzichiri kuda kuitwa kuNVC0 Gallium3D kutsigira OpenGL.
Tsigiro ye AMD Pollock.
Tsigiro ye AMDGPU reset yeRenoir naNavi.
Intel Gen11 uye Gen12 mifananidzo inowedzera.
Dzimwe shanduko zhinji kumadhiraivha e DRM.
yakagadziriswa multimedia madhiraivha eRockchip SoCs.
ASUS malaptop ane AMD Ryzen processors anomira kupisa uye kupwanya
tsigiro yemakodhi matsva eSoC nemaARM
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa chirevo chakatumirwa naLinus Torvalds mu inotevera chinongedzo.
Kuti uedze iyi RC1 kubva kuLinux 5.6, unogona kurodha pasi kodhi kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux 5.6 RC1 yakaburitswa neWireGuard rutsigiro, 2038 gadziriso, USB4 rutsigiro uye nezvimwe.